”Waxaan dalbanaynaa doorasho daah-furan!” – Beesha Caalamka oo saluugtey hab-raacii lasoo saaray | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Waxaan dalbanaynaa doorasho daah-furan!” – Beesha Caalamka oo saluugtey hab-raacii lasoo saaray
”Waxaan dalbanaynaa doorasho daah-furan!” – Beesha Caalamka oo saluugtey hab-raacii lasoo saaray
(Muqdisho) 25 Agoosto 2021 – Beesha Caalamka ayaa War Saxaafadeed rasmi ah kasoo saartay shirkii ay dhowaan Muqdisho ku yeesheen madaxda Golaha Wadatashiga Qaranka, kaas oo laga soo saaray hab-raac doorasho oo muran siyaasadeed oo badan dhaliyey.
Hab-raacan ayaa waxaa wada diidey Midowga Musharaxiinta, Ururrada Bulshada Rayidka iyo xitaa dadka waxgaradka ah ee doonaya in dalku yeesho wax nidaam hufan lagu tilmaami karo, si dhibaato cusub looga fursado tii horena looga dawoobo.
Haatan, beesha caalamka ayaa iyaduna war kasoo saartay shirkaasi ay yeesheen RW DF Somalia iyo madaxda Maamul-goboleedyadu, iyadoo waloow ay soo dhoweysey misna soo jeedisey in wixii khaldan la turxaan bixiyo si loo taageero.
Halkan ka akhri War Saxaafadeedka oo dhan:
”Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka* ayaa soo dhoweeyay shirka Madasha Wadatashiga Qaran (MWQ) ee 21 iyo 22 Agoosto, waxayna bogaadiyeen wadatashigooda joogtada ah si horey loogu wado hanaanka doorashada,” ayaa lagu bilaabay.
”Waxaan aragnaa in la dhammeystiray doorashada Aqalka Sare ee Puntland iyo Koonfur Galbeed iyo in hanaanka laga billaabay Jubaland iyo Galmudug. Waxaan sidoo kale garowsanahay walaaca laga keenay hanaanka doorashada Aqalka sare, waxaanan Guddiga Wadatashiga Qaran ku boorrinaynaa inay arrimahan wax ka qabtaan si loo taageero hanaan doorasho oo daah-furan, waqtiyaysan, loo wada dhan yahay oo lagu kalsoonaan karo oo loo qabto Golaha Shacabka.
”Tiiyoo la xusuusanayo in 24% ay kuraasta Aqalka Sare ay ilaa iyo hadda haween ku guuleysteen, waxaan ku baaqaynaa in dadaallada la laba-laabo si loo gaaro qoondada haweenka ee ugu yaraan boqolkiiba 30 ee kuraasta labada Aqa lee Baarlamaanka ay haweenku helaan.” ayaa lagu soo afjaray.
Somalia’s international partners have urged the country’s leaders to ensure the credible process for the upcoming Lower House election following concerns raised over the Upper House process. pic.twitter.com/af3K6HPoo2
— Mohamed Haji (@Derisuroone) August 25, 2021
Previous articleHal sawir oo muujinaya hab-dhaqanka reer Galbeedka oo si waadax ah uga muuqda sida loola dhaqmayo Daalibaanka
Next articleTurkiga oo ka quustay qorshe uu ka quud darraynayey dalka Afghanstan + Sawirro